Garsoore Clattenburg oo Oscar iyo Tevez u raacaya horyaalka Chinese Super League!
Thursday, January 24th, 2019 - 13:57:50
Friday December 30, 2016 - 19:36:07 in Wararka by Muuse Cabdi
Mark Clattenburg ayaa shaaciyay in uu diyaar u yahay ku biirista horyaalka China isagoo u muuqda in uu sii kordhinayo waqtiga uu ka shaqeyn doono Arrimaha garsoorka.
Ninkan oo 41-jir ah ayaa noqday garsooraha dunida ugu fiican Globe Soccer Awards oo lagu qabtay Dubai Talaaadadii isagoo dhex-dhexaadiyay FA Cup, Champions League iyo Euro 2016 finalkooda intii lagu jiray 12-kii bilood ee lasoo dhaafay.
China oo ay kasoo muuqato kubbad cag oo ifbaxeysa, waxaa ku biiray dhowaan wiilkii Chelsea Oscar iyo ninka dunida ugu mushaarka badan ee Carlos Tevez oo ka yimid Boca Juniors heshiiskiisa toddobaadkiiba waxaa lagu sheegay £615,000, Clattenburg ayaa dhankiisa raadinaya fursad uu ugu biiro horyaalkaas.
"China ayaa hadda muujisay kubbad cag oo horumareysa, u fiirso saxiixyada iyo horumarka ka socda," Clattenburg ayaa u sheegay Associated Press.
"Haddii fursaddu ii saamaxdo – waxaan qandaraaskeyga Premier League keddib noqon doonaa mid is beddel sameeyay- ma ahan mustaqbalkeyga oo dhan in uu yaallo horyaalkan. Ilaa goorma ayaan garsoore ahaan karaa? Waxaan halkan Premier League ka ahaa12 sano. Umana qalanto 12 sano.